Taona 2016 /
"Anaka, tandremo ny teniko; atongilano ny sofinao hihaino ny filazako… Raketo ao am-ponao. Fa aina ho an’ny mahazo azy izy." Ohabolana 4:20-22
Aoka izay ny fitarainana! Andriamanitra efa namorona tontolo mahafinaritra, misy zavatra isan-karazany, namorona ny ranomasina raha maniry hiaina zavatra tsy fahita ianao, namorona ny taniefitra raha mila toerana midadasika ianao, ny hazo sy ny voninkazo, noho ny hakantony. Nataonao inona ireny?
Nomeny torohevitra tsotra ianao, hitondranao ny fiainanao (“Aza mangalatra, aza mamono olona, manajà ny rainao sy ny reninao”). Nanaraka izany ve ianao?
Manome toky Izy fa hikarakara, hamaly ary hanohana anao. Ny miresaka aminy fotsiny no tokony hataonao, saingy tsy dia mahare anao matetika Izy!
Nomeny fahaizana hanavaka ny tsara sy ny ratsy ianao, nataony afaka misafidy. Ahoana no fanaovanao izany safidy izany? Mba te hanana toerana manokana eo amin’ny fiainanao Izy, te hanana fotoana atokanao iarahana aminy. Be zavatra atao loatra ianao! Indraindray ianao sasatra, kivy, maro ahiana… dia hadinonao fa miandry anao hiantso Izy!
Ny volanao no heverinao bebe kokoa noho Izy! Tianao ny fialamboly tsy misy antony, tsy mampiasa saina, na mahadomelina mihitsy aza. Te hiaina tsy voateritery ianao, tsy voafatotra fitsipika heverinao ho henjana sy lany andro, te «hanararaotra» ny fiainana, tsy te hiraharaha izay ho vokatry ny ataonao, tsy mieritreritra an’Andriamanitra.
Fa Izy kosa, tia anao! Tiany ny hitondra anao ho amin’ny fahasambarana nomanin’i Jesosy ho anao, tamin’ny nahafatesany. Efa nentin’i Jesosy tamin’ny tenany io fahotanao tsy miraharaha an’Andriamanitra sy mikomy aminy io. Te hamonjy anao Izy, te hanome fiainam-baovao ho anao, te hananatra anao am-pahalemem-panahy, te hanolo-tsaina anao, izany hoe, raha fintinina, te ho tia anao. Satria fitiavana no maha eo Azy, tsy mety sasatra, tsy mety sosotra, mamerimberina hoe: “Manaraha Ahy ianao!” Izy no Andriamanitrao, Ilay nahary anao, ary te ho Rainao Izy.